Akụkọ - Ezi na akwa na-efe ọka nzuzu, ahịa amino acid kwụsịrị ịda ma bulie ya
Ezi na akwa na-efe ọka nzuzu, ahịa amino acid na-akwụsị ịda ma bulie
Mgbe ntọhapụ nke ikike ọhụrụ na-ebute nje okpueze ọhụrụ na-akụ ọkụ na nnyefe ahụ karịrị ihe a chọrọ, na ọnwa ndị na-adịbeghị anya, amino acid ndị ọzọ na-amị amị adaala site n'elu ugwu ahụ ruo na ndagwurugwu, dịka lysine, threonine, tryptophan, valine , wdg), ebe ọka ọka na-aga n'ihu n'ụzọ niile, na-ebili nzuzu. Ndị ụlọ ọrụ Amino acid ataala ahụhụ ihu abụọ site na ụgwọ na ọnụahịa. Na mgbakwunye na oge mmezi ọkụ dị elu, ọnụego ọrụ ụlọ ọrụ agbadala, ọnụ ọgụgụ ndị nrụpụta na-akwụsị ịkọ na bulie ọnụ ahịa abawanyela. Nzụlite nke ụlọ amalitela. Ọ dị mma, ahịa amino acid kwụsịrị ịda ma bulie na njedebe nke ọnwa, na ịzụrụ na ire ahịa ka mma. Ugbu a, ahịa ahịa nke 98% lysine bụ RMB 7-7.5 / kg, ọnụahịa nke methionine bụ RMB 18-19 / kg, ọnụahịa nke threonine bụ RMB 8-8.5 / kg, na ọnụahịa nke tryptophan bụ RMB 43.5 -46 / n'arọ.
Ndị na-emepụta ihe na-akwụsị imepụta ma na -ekwupụta ozi oge niile
Iri iri na-aga nke ụlọ ahịa nke ọka ọka na-adịru nwa oge hụrụ nnukwu azụmahịa na ụgwọ dị elu. Ahịa ọka na-ekpo ọkụ, na-abawanye karịa 100 yuan kwa ton site na mbido ọnwa. Ọnụ ahịa ahịa ahịa nke ugbu a nke 2275,26 yuan / ton arịgoola n'ọnọdụ kachasị elu n'ime afọ ise gara aga. Nri soybean esokwara. Ná mmalite nke ọnwa ahụ, ọ rịrị site na 200-300 yuan / ton. Ọka bụ akụrụngwa maka amino acid dị ka lysine, threonine, na tryptophan. Companieslọ ọrụ na-arụ ọrụ ọka dị omimi na-aga n'ihu ịbawanye ọnụahịa nzụta, ụlọ ọrụ nri na-arịwanye elu n'ihi nnukwu ihe na ndị ọzọ. Ọnụahịa riri sitere na 50-100 yuan / ton. Ọchịchọ maka ịgbasawanye ike amino acid n'afọ a esighị ike, ndị ahịa na-ere ngwongwo, ndị na-emepụta bekee na-akwalite ọnụ ahịa iji kwalite azụmahịa, na-ebelata ihe iji belata mbibi ma belata nrụgide ngwaahịa.
Mmelite nke mgbake anụ ụlọ
Plum na-awa okooko osisi n’ebe ndịda n’etiti-na-mbubreyo July, na ọnọdụ idei mmiri ahụ belatara na njedebe nke ọnwa. N’ọnwa a, arụ ọrụ ugbo ọkụkọ ụlọ ka mma, ọkụkọ na akwa na-abawanye, ọnụ ahịa ezi wee bilie. Ọ bụrụ na ọ bụ nnọọ Tailai, àkwá efuola maka ihe karịrị ọkara afọ. Banye n'ọkwa a na-alaghachi azụ, ọnụ ahịa akwa jiri nwayọ nwayọ na July, ndị na-ere ahịa akwa wee gbanwee uru dị na uru. Dabere na nyocha data nke Huitong, site na July 31, ọnụahịa nke àkwá bụ 8.05 yuan / kg, mmụba nke 70% site na mmalite nke ọnwa. Kemgbe mmalite afọ a, idei mmiri ebutela ọdachi nde 33.85 na mpaghara 27 (mpaghara kwụụrụ onwe na obodo) gụnyere Zhejiang, Anhui, Jiangxi, Hubei, Hunan, Guangdong, Guangxi, Chongqing, Sichuan, Guizhou, wdg. buru ibu, na ngwongwo ezì ụlọ na-aga n'ihu na-akawanye mma. Dabere na nlekota oru 4000 nke Ministry of Agriculture and Rural Affairs, ebuka nke ezì na ịgha mkpụrụ na ezinụlọ na-amụba amụbaala maka ọnwa 5.
Na mkpokọta: ọkọnọ na-ebelata, ụgwọ dị elu, omume ndị nrụpụta na-arịwanye elu, a na-achịkwa ọrịa na-achịkwa ụlọ n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Fọdụ ndị na-eme nchọpụta na-ekwu na enwere ike ịnweta ọgwụ mgbochi maka oge opupu ihe ubi na-esote, nri ndị na-eri nri n'ụlọ na-akawanye mma, ụlọ ọrụ ịmị amị ji nwayọọ nwayọọ gbakee, ọnụ ahịa soybean na-arịkwa elu. N'ịchọ mmasị maka amino acid, ahịa akwụsịla ịda ma gbakee, ahịa ahụ kwụsiri ike ma rụọ ọrụ nke ọma. Otú ọ dị, ọnọdụ ntiwapụ nke ndị mba ọzọ ka siri ike, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị 200,000 na-achọpụta ọrịa kwa ụbọchị. N'ime ha, United States, Brazil, India, Russia, na South Africa dị oke njọ. Ọchịchọ ndị mba ọzọ ka na-esighi ike, ọtụtụ ụlọ ọrụ ụlọ na-mejupụta akụ ha, na-egbochi ịghaghachi ahịa.
L-Valine 72-18-4, L-Threonine Pharm ọkwa, 73-32-5 L-Isoleucine, Nri oriri na-edozi ahụ, L-Threonine Nri Nri, Gralọ ọgwụ Pharm L-Leucine,